Translate Albanian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Albanian to Myanmar (Burmese), Albanian to Myanmar (Burmese) translations, Albanian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Pershendetje si jeni မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
A ka dikush? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Të dua shumë ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Sa kushton kjo hamburger? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
A mund të më telefononi një taksi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
me vjen keq ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Më falni တဆိတ်လောက်
Unë jam i interesuar ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Fluturimi im u vonua အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Jam këtu për biznes ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Pershendetje, emri im eshte မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Më vjen keq, por jamemartuar ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Do të doja t'ju pyesja ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Mund të më çoni në aeroport? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Cila është koha tani, ju lutem? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Ku është stacioni më i afërt i policisë? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Mund të huazoj ngarkuesinetelefonit tuaj ju lutem? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
A mund te me ndihmosh? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Më urdhëroni një pije, ju lutem? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Sa kushton? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Unë jam alergjik ndaj glutenit ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Thirrni një mjek ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
A ka një mjek? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Mund të kam një telefonatë? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Më thirrni shefin tuaj ju lutem. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ky vend është shumë i bukur ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Më çoni në hotel ju lutem ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Cili është numri i dhomës time? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?